Ukwazi ukuthi abantu base-Australia babingelelana kanjani | Ukuhamba kwe-Absolut
Isabella | 16/04/2021 11:15 | Kubuyekezwe ku- 16/04/2021 12:15 | Australia
Uma eholidini lakho elilandelayo ufuna ukuthatha uhambo oluya e-Australia noma ungathanda ukuyofunda kulelizwe, esinye sezici okufanele wazi ukusheshe uvumelane nempilo kunamasiko nemikhuba yaso yansuku zonke.
Kwabanye abantu abahlala ezweni elisha kungadala ukwethuka kwesiko, ikakhulukazi njengoba bejwayela indawo yabo entsha. Ukuhlala emphakathini onjenge-Australia kunezinto eziningana ongazenza, ezizokusiza ukuthi uzivumelanise nezimo ngokushesha okukhulu futhi uzizwe ufana nenhlanzi emanzini.
Ekuthintaneni kokuqala nabomdabu, noma ukubuza indlela noma uhlobo oluthile lolwazi, kuzodingeka ubabingelele futhi uzethule ngokufanele. Ngalesi sizathu, kule ndatshana sizofunda ukuthi abantu base-Australia babingelelana kanjani.
2 Kunjani ukubingelela e-Australia?
3 Yimaphi amafomula asetshenziselwa ukubingelela e-Australia?
4 Zinjani izethulo?
5 Abantu base-Australia babingelelana kanjani ephathini?
6 Ezinye izindlela zokubingelela emazweni weCommonwealth
Abaziwa nangokuthi "ama-Aussies" ase-Australia ngokuvamile banobungane, bathembekile, bayahlangana futhi abakahlelekile ekusebenzeni kwabo. Bajabulela izinga lemfundo elihle, elihumusha lithole amathuba emisebenzi amaningi kanye nekhwalithi ephezulu yempilo. Lesi sakamuva sibonakala kumlingiswa wabo onobungane, ovulekile futhi okhululekile.
Abantu base-Australia ngabantu abalula abawazisa kakhulu umzamo nokusebenza kanzima, ngaphandle kokuhlukanisa phakathi kwezigaba zomphakathi. Babonakala ngengqondo yabo evulekile, inhlonipho ngamanye amasiko nokwamukela kwabo abantu bakwamanye amazwe. Ngamafuphi, abantu base-Australia ngabantu abafudumele, abasondele futhi abanobungane.
Kunjani ukubingelela e-Australia?
Lapho sikhuluma ngokuthi ukubingelela e-Australia kunjani, kufanele sinake umongo lapho lokho kuhlangana okuqala khona ingxoxo kwenzeka khona. Ngamanye amagama, ukuhlangana okungahleliwe komndeni noma abangane akufani nomhlangano womsebenzi osemthethweni.
Isibonelo, abase-Australia phakathi kwabangani babingelelana ngendlela enothando: ngokuqabula esihlathini noma ngokwangana okufishane. Manje, noma ngabe kungumhlangano webhizinisi noma waseyunivesithi, abantu base-Australia babingelelana ngesizotha nangokusemthethweni ngokuxhawulana okufishane nokumamatheka.
Ngokwesiko lase-Australia futhi njengakwamanye amazwe amaningi, ukubingelela kufanele kwenziwe ekuqaleni nokuphela komhlangano, kanye nanoma iziphi izivakashi ezingahle zifike phakathi nomhlangano.
Ngaphezu kwalokho, abantu base-Australia bavame ukukhuluma nabanye abantu besebenzisa amagama abo ngisho nasemhlanganweni wokuqala ngakho-ke kubalulekile ukuthi uwakhumbule amagama abantu abakhuluma nawe lapho bethulwa kuwe. Kubalulekile futhi ukubheka iso lapho ubingelela omunye umuntu. Lokhu kuwuphawu lwenhlonipho futhi kukhombisa nokuthi unake futhi ulalele okushiwo omunye umuntu.
Yimaphi amafomula asetshenziselwa ukubingelela e-Australia?
I-G'day: Ifomu elifushanisiwe elithi "Usuku oluhle" ifomula evame kakhulu futhi engakahleleki yokubingelelana futhi ibizwa ngokuthi "usuku lwasebusuku." Ingasetshenziselwa imini nobusuku.
"Ow ya goin 'mate?": Yifomula efushanisiwe eyaziwayo "Uhamba kanjani mlingani?" okusho ukuthi unjani.
"Cheerio": Uvame ukuvalelisa.
"Cya This Arvo": Njengoba uzobona, abantu base-Australia bathanda ukufinyeza amagama. Le fomula isho ukuthi "Sizobonana ntambama." Basebenzisa igama elithi arvo ukubhekisa ntambama kuzo zonke izimo.
"Hooroo": Kusho ukuthi sizokubona ngokuhamba kwesikhathi.
"Sawubona ntambama": Sawubona ntambama.
"Sawubona kusihlwa": Sawubona kusihlwa.
"Nilale kahle Nilale.
"Ngiyajabula ukukwazi": Ngiyajabula ukukwazi.
"Kuhle ukukubona": Ngiyajabula ukukubona.
Uma kukhulunywa ngokwethula bobabili abesilisa nabesifazane esimeni esisemthethweni, amagama athi "Señor", "Señora" kanye "Señorita" asetshenziswa ngokuthi "Mnu", "Nkk." kanye no- "Miss" amagama abo afanele esiNgisini.
Uma kuyisethulo esingahlelekile phakathi kweqembu labangane, izinkulumo ezinjengokuthi "Lo ngumngane wami uPeter" (ungumngane wami uPeter) noma "Lona u-Ann engisebenza naye" (ungu-Ana, engisebenza naye) angasetshenziswa .
Abantu base-Australia babingelelana kanjani ephathini?
Ungasebenzisa noma yimaphi amafomula engiwakhombisile ezigabeni ezedlule. Kodwa-ke, kufanele kukhunjulwe ukuthi uma umenywe emcimbini noma izoso kuyisiko lakho ukuthi uphathe okuthile okuphuzwayo (isibonelo ubhiya, iwayini noma iziphuzo ezibandayo) ukujabulisa iqembu nokwakho.
Futhi, e-Australia kubhekwa njengemikhuba emihle ukuxhumana nomphathi weqembu ukubona ukuthi badinga noma bafuna yini ukuthi uze nokunye. Ngakolunye uhlangothi, uma umenyelwe esidlweni sakusihlwa endlini yomunye umuntu, kuyisiko ukuletha isipho kumninikhaya lapho ufika, njengesixha sezimbali, ibhokisi lamashokolethi noma ibhodlela lewayini.
Ezinye izindlela zokubingelela emazweni weCommonwealth
ICommonwealth yinhlangano yokuzithandela yamazwe angaphezu kwamashumi amahlanu anobudlelwano bezamasiko, zomlando namasiko, iningi lawo okungamaNgisi ulimi olusemthethweni.
Yize izwe ngalinye linohlelo lwalo lwezepolitiki futhi lizimele, amanye anjenge-Australia noma iCanada aqhubeka nokugcina ukuxhumana nobukhosi baseBrithani. Ngakho-ke ubingelela kanjani emazweni angamalungu e-Commonwealth afana neCanada noma iNgilandi?
Abantu baseCanada bangabanye babantu abanobungane kakhulu emhlabeni, okuhumusha imikhonzo abayisebenzisayo ukuxhumana nabanye.
Isibonelo, eQuebec ukubingelela okusetshenziswa kakhulu ngu "Bonjour" no "Ça va?" ngenkathi baseMaritimes abantu babingelelana ngo "Sawubona" ​​noma "Sawubona" ​​olula olandelwa ngumngane onobungane "How ya 'doin'?" Ngakolunye uhlangothi, i-Ontario neToronto nazo zisebenzisa amafomula afanayo.
Kuthiwa i-Alberta neSaskatchewan kulapho kuhlala khona abantu abanobungani ezweni futhi uzothola njalo abantu abazimisele ngokuxoxa ngokungafani nasemadolobheni amakhulu lapho abantu bavame ukugijimela kakhulu.
Indlela ejwayelekile esetshenziswa kakhulu amaNgisi ukubingelelana ukuxhawulana Futhi kujwayelekile ukukusebenzisa lapho othile ethulwa komunye umuntu noma ngaphambi kokuqala umhlangano kwezamabhizinisi.
Imvamisa ubingelela ngokuqabula kwesinye sezihlathi lapho abakhulumeli bengabangane noma abantu obajwayele futhi kukhona uthando phakathi kwabo. Ngokungafani namazwe afana neSpain, akuyona into ejwayelekile ukubingelela ngokwanga njalo.
Ezinye izindlela zokubingelela yilezi:
"Sawubona noma Sawubona": Kusho ukuthi "sawubona".
"Unjani?": Kusho ukuthi unjani futhi kuvame ukushiwo ezimeni ezisemthethweni ezihambisana nokuxhawulana.
"Unjani?": Kusho nokuthi "unjani" kepha isetshenziswa ezimweni ezingekho emthethweni ngokwengeziwe. Imvamisa iphendulwa ngokuthi "Ngiyaphila ngiyabonga, wena?" okusho ukuthi "ngiyaphila, ngiyabonga, nawe?"
"Ngiyajabula ukukwazi": Le nkulumo isho ukuthi "ngiyajabula ukukwazi" futhi ivame ukukhulunywa ngenkathi kuxhawulwa izandla. Imvamisa iphendulwa ngokuthi "ngiyajabula ukukwazi nawe" (nami ngiyajabula ukukwazi) futhi kuvame ukushiwo ngenkathi sixhawula izandla.
«Ngijabule ukukuhlangabeza»: Kungenye indlela yokubonisa ukuthi othile ujabulile ukuhlangana nomunye umuntu. Ukuphendula, "futhi" kufakwa ekugcineni komusho njengasesimweni esedlule.
Sebenzisa lawa macebiso amancane emihlanganweni yakho yesikhathi esizayo ezweni lolwandle futhi uzobingelela njenge- "Aussie" yangempela!
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukwazi ukuthi abantu base-Australia babingelelana kanjani
lawo ma-carepenis ayabingelelana njengesitabane futhi ancela iqhude abesilisa nabesifazane bayaphela futhi bahleke izitabane babambe izimbongolo zabo nezinsipho nomunwe imbongolo amahora angama-3000 ukushaya indlwabu nokuphela kwe-shitddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa